DHAQ DHAQAAQA KOOXDII XAARAAN QUUTAYAASHA AY KA WADAAN MUQDISHO MA KICIN QABIIL MISE KICIN QARAN
30 December, 2017 in Maqaallo by Adam Increase
Waxaa cid walbaa ay ka dharagsan tahay, geedi socodka nabad ku soo dabaalida dalka soomaaliya oo mudo ku dhaw rubuc qarni ku sugnaa xaalad MAQNAANSHO DAWLO. Halaagyada iyo musiibooyinka waa wayn ee dalka ka dacay kuwooda ugu xun waxaa kamid ah MAQNAA
Waxaa cid walbaa ay ka dharagsan tahay, geedi socodka nabad ku soo dabaalida dalka soomaaliya oo mudo ku dhaw rubuc qarni ku sugnaa xaalad MAQNAANSHO DAWLO. Halaagyada iyo musiibooyinka waa wayn ee dalka ka dacay kuwooda ugu xun waxaa kamid ah MAQNAANSHAHA DOWLADNIMADA, taasoo keentay in hubku gacanta u galo shacabka iyo wax magaratada. Dadyawgii ahaa ilbaxda iyo dawlad yaqaanka hadalo badan ayay ka yiraahdeen arimahaan, waxaanse jeclahay in aan soo qaato hal hadal oo nin asxaabi jaliil ahi yiri Allaah haka raali ahaadee"Konton iyo kow sanadood oo xukun diktaytar ah ama xukun xun ood ku hoos noolaato ayaa ka khayr badan hal maalin oo aad ku noolaato MAQNAANSHO DAWLO."
Dawladnimada dadka qaarkii maba fahmi karaan. Aduunyada hada waxaa gabaabsi kasii ah oo ku yar amaba ay adagtahay in la helo waxaa loo yaqaan (Savage People) dadweeyne u nool una dhaqma sida xayawaanka duur joogta oo kale oo horor ah, waxaa kaloo la yiraahdaa waa dad badaw ah oo unool sidii xiliyadii dhuuga oo nool, yacni bilawgii aadanaha siduu u dhaqmi jiray hada u dhaqma. Burburkii ka hor isma lahayn hor illaahay dad noocaan ah oo heerkaan ayaa ku nool soomaaliya.
Dawladnimooy xaal qaado, sida aynu wada ognahay dawladan hada jirtaa waa dadaashay, waana muuqdaa waxay ka qabatay dhaqaale ahaan iyo nabad galyo ahaan dalkeena mudo bila ah oo ay shaqaynaysay in talaabo hore loo qaaday caalamka iyo dadka ilbaxa ah ee soomaaliyeed ay wada qireen ooyna ku faraxsan yihiin.
Waxaa lagu saleeyay wax ku qabsi beeleed wax loogu yeeray, waxaa diiday oo ka horyimid qabiil in wax lagu dhiso, dadkii ilbaxa ahaa sida PUNTLAND. Xiligii madaxwayne Cabdullahi yuusuf waa kii diiday ee deegaan taagna, madaxwayne Dr C/Qaasim waa diiday in soomaali qabiil wax loogu dhiso, waxaa lagu qanciyay kolkii danbe in waxan laga bixi doono ay ugu yeereen 4.5 oo ah waxaynaan waligeen arag oo maqal afar beelood oo waa wayn oo dhamays ah iyo qolo kale oo iyadu nus ah! soomaali oo dhan ayaa ka qayliday fool xumadaan , waxaana keenay SAVAGE PEOPLE kaa aan kor ku sheegay. Dawlad goboleedka Puntland markii hada la dhisaayay baarlamanka hada jira oo ah aqal sare iyo mid hoose way diiday in qabiil lagu saleeyo wixii ka dhacay soomaali waa ogtahay aduunkuna waa ogyahay.
Markaa dawlada hada jirtaa laguma soo dooran hab deegaan iyo nidaamyada aduunyada ka jiraan ee lagu dhiso dawladnimada,aqalka sare iyo midka golaha shacabka laguma soo dooran nidaamaka dawladnimada iyo ilbaxnimada, waxaa la qaatay rabitaankii SAVAGE PEOPLE ay keeneen soomaaliya. Soomaalidii kale oo dhan waxaa lagu aamusiiyay sabra waa laga baxayaa waxani waana loo jeedaa wax soconaya in aysan ahayne, waa khalad wayn oo laga galay umada soomaaliyeed.
Wali maynaan gaarin baarlamaan aqal sare iyo golaha shacabka oo lagu soo doorto nidaam dawli ah, sida caalamka, maynaan gaarin aqalka sare iyo golaha shacabka xubnahooda oo ku kala jira xisbiyo siyaasadeed oo dalku leeyahay. mana jirto xisbiyo ku tartamay dalkeena oo midna guulaystay qaarna yihiin mucaarad iyo muxaafid xisbiga guulaystay wax la dhistay. Tan waxaa gaadhay soomaaliland. Hasa yeeshee soomaaliyana dawladan hada jirtaa waxay u gogol xaaraysaa in lagaaro mustaqbalka xisbiyo iyo nin iyo codkiis, hadana amaankii iyo kala danbayntii ayaa lagu mashquul san yahay dalkuna waxa uu ku jiraa dagaal cadawga iyo dawlad diidka lagu sifaynayo.
DHAQ DHAQAAQA KOOXDII XAARAN QUUTAYAASHU AY KA WADAAN MOGIDSHO KICIN QABIIL
Waxa jira in dalkeena ay sabab u noqdeen in dawladi ka dhalan waydo dadkaa badawda ah ee aan kor ku xusay mudo 27 sanadood ah, waxaana la haray arimo la xariira garaadka iyo aqoonta dawladnimo iyo dhaqanka oo ay ka aradan yihiin, mana fahmi karaan macnaha dawladnimadu, hada waxaa ayaamahan dawladan ku soo duulay dhawr nin oo ay hogaaminayaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur, Fiqi, Osamas iyo Mahad Salaad, kooxdan oo soomaalidu u taqaan XAARAAN QUUTAYAAL.
XAARAAN QUUTAYAAL kuma socdaan fikir iyaga ah ee waa lasoo adeegsaday, waxay fulinayaan arimo lagu soo lacag siiyay oo ah inay dawladan ridaan dalkana galiyaan khalkhal iyo fawdo si shabaab u soo rogaal celiyo oo shacabka u gumaado. It agu waa dawlad diid, waxay ku badasheen diintii, soomaalinimadii, dawladnimadii, xoogaa shilimaan ah. Waxay ka xun yihiin nabada ay heshay MOGDISHO iyo hormarka ifafaalaha dawladnimada dhashay.
XAARAAN QUUTAYAAL waxay rabaan in ay shaatiga ka wasakheeyaan beelo iyo siyaasiyiin karaamo ku leh bushada dhexdeeda barina waji ka heli kara in ay dalka wax ka noqdaan. Waxay sameeyeen qaybin lacag loo soo dhiibay oo lagu ilaalinayo, waxay hareer mareen nidaamkii dawliga ahaa, waxayna abuureen waxaan jirin oo ah inay iska furtaan shirar ay ugu yeereen Talo-wadaag si halkan ay ugu dhex dhuuntaan. Nuucay ku dhaqmayaab waa dowlad ka madax banaan nidaamka dawliga ah ee dalka ka dhisan. sidii iyadoon dalka sharci jirin ay tahay waajib in lasoo maro ayay iskood ugu dhawaaqeen olole dhanka ah dawlada iyo waxaan jirin oo khuraafaad ah dalka lagu duminayo amaankiisa iyo dawlad nimadiisa. XAARAAN QUUTAYAAL waxaa loo soo dhiibay inay fuliyaan kicin qabiil, ileen dawlada iyo baarlamanka waxba kama qaadi karaan saamayna kuma yeelan karaane, waa baas abuur iyo arimo qabyaaladeed oo cadaan ah, waxay u gafayaan Magaca CAASIMADA SOOMAALIYEED MOGDISHO, waxayna ka dhigeen in beel gaara leedahay dadka kale oo madaxwaynuhu u horeeyana yihiin marti lagana saari doono qori caaradii, waa arkaysaa waa sumcad dilid iyo kicin qabiil.
Dowladaha aduunka oo dhan gaar ahaan kuwa dimuqraadiga ah, kama dhacdo in koox siyaasiyiin ah oo qaarkood baarlamaan yihiin qaarna ka baxsan yihiin in ay is uruursadaan oo ay shir qabsadaan kana hadlaan arimo siyaasadeed. Hadayba dhacdo waa danbi lagu muto xabsi daa'in ama dil dalalka qaarkood. Shuruucda dawladuhu sina uma aqbalaan mana dhici kartaba fal noocaan oo kale ah shir siyaasiyiin warkeed iskabadaa ee waxaan dalalka nidaamka leh iyo dimuqraadiyada ka jirin in dad koox ah ay qabsadaan shir aan ku saabsanayn siyaasad iyo wax u dhaw toona, iyaga oo aan dawlada dalkaa hayadaha amaanka ka haysan ogolaasho ay ku qabsadaan shirkaas.
Dadka ilbaxa ah ee dawlad yaqaanka ahi waa fahmayaan laakiin kooxdan XAARAN QUUTAYAASHA ahi waxay ceebeeyeen shacabka MOGDISHO oo ay ugu sheekeeyeen dimuqraadiyada ayaa sidan ah xor baanahay waa shiri karnaa dawlada waa diidi karnaa. Dowlad qaab loo mucaarado iyo meel lagu mucaarado ayaa jirta iyadoo sharciga la marayo. shir waa la qabsan karaa hadii uusan amaanka dalka wax u dhimeynin ogolaan shahana dawladaa bixinaysa. Lama ogola nidaamka dawliga ah in dalka lagu qabto shirar aan dawladu raali ka ahayn oo hay adaha amaanku ogolaan sida sharcigu qabo dawlad walba caalamka. Meeshu ma xero geelbaa!! ma fawdo iyo xiligii dagaal oogayaashii ayaan wali ku jirnaa?
Dawladu waa ku celcelisay sharciga dawliga ah in lasoo maro cidii shir qabsanaysa waa in ay hayadaha amaanka ka haystaan ogolaansho sida ay ka jirta dowlad walba. XAARAAN KUUQATAYAAL waxay u dhaqmayaan in ay dawlad kale iyagu yihiin,oo ay xor u yihiin in ay iska shiraan xor u yihiin ay qabiilooyinka isku diraan kiciyaan dawlada laga hor istaago in ay la dagaasho shabaab oo MOGDISHO nabadayso oo hormariso. Waxay ku leeyihiin maxaan dawlad uga baahanahay oo ka waydiisanaynaa, meesha ma dawlad baa jirta Siyaad Barre ayaa kursiga fadhiyee? cid aan ka tuugayno majirto in aan shirno ,cidii naga hor timaadna gobolada dhexe aan isaga yeeranaynaa, meeshii aan adeerkiis Siyaad marinay shalay aan marinaynaa. Nimanka warkoodu sidan yahay waxay yihiin shacabka soomaaliyeed waa u cad yahay iyo dawlada soomaaliyaba sharcibaanu dalku leeyahay fawdo maha siday moodeen ee ay u dhigayaan.
Waaba niman dawlada dhaaf siisan oo dawlado kale la haysta oo aan aqoon sanay ba sharciga iyo dawlada soomaaliyeed, waxayba ku doodayaan oo dadka aan dawlada aqoon ugu sheekaynayaan, in ay khalad tahay in nabad sugida qaranku guri u dhacaan iyagoo gudanaya waajib qaran iyo ilaalinta amaanka dalkeena. Iyagu waa dawlad diid cadaw ah, waxay wadaan fawdo iyo dumin dawlada hada jirta iyo amaanko faraha ka baxa MOGDISHO. Waxay la dirirayaan ilbaxnimada iyo dawladnimada iyo sinaanta, waxay rabaan gunimo sidooda oo kale ah, dawlad la'aan,amaan daro iyo shisheeye u adeegid damacooduna waa uun sideed ku heshaan doolar.
XAARAN QUUTAYAAL xiligoodii waa dhamaaday 27 sanadood kadib, waxay ka masayr san yihiin ilbaxnimada FARMAAJO.
By: Dr Soomaali